तानाशाह ओली : आफू धम्काउँदै हिड्ने, अरु बोले धम्की !
प्रकाशित मिति : २६ पुष २०७७, आईतवार १२:०८
युवा संघको भेलामा उनले ‘एकपटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा बाहिर आएर जथाभावी बोल्न नहुने’ भनी टिप्पणी गरे । ‘पोहोर, परार जागिर खाएको थिएँ र अहिले पनि जागिर खाएको छु भन्ने नठान्नुहोस् । अदालतको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अदालतलाई गुमराहमा पार्ने, धम्क्याउने, अलमल्याउने गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘न्याय, संविधानका कुरा गर्ने  ? सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट  ?’